निसीखोलाको भल्कोटमा लाग्ने विशेष माघे सक्रान्ति मेलाको विधिवत उद्घाटन भोलि ! – ebaglung.com
निसीखोलाको भल्कोटमा लाग्ने विशेष माघे सक्रान्ति मेलाको विधिवत उद्घाटन भोलि !
२०७४ माघ २, मंगलवार ०५:३४	Top News, थप समाचार
कुम्बिर बिश्वकर्मा , बुर्तिबाङ २०७४ माघ २ । नेपालीको महान चाड त्यस माथीपनि मगर जातिहरुको विशेष चाडपर्व मानिने माघे सक्रान्ति मेला जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा विविध कार्यक्रमहरु गर्दै मनाईदै आएको छ ।
माघे सक्रान्तिका अवसरमा बागलुङ जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित भल्कोटमा परम्परागत ढंगले देवी पुजा, पुतली नाँच, झाँक्री नाँच, भालु नाँच, कापाई नाँच आदि प्रदर्शन गरेर माघे सक्रान्ति (माघी) मेला भव्यरुपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ ।
उक्त नाँचहरु निकै आकर्षक र सामुहिक रुपमा स्थानीय परम्परागत भेषभूषा र तरवार हातमा लिएर नाच्ने भएकाले मेला आकर्षक हुने अध्यक्ष बुढा मगरले ईबागलुङलाई बताए । माघ १ गते देखि नै खेलहरु संचालन हुने भए पनि औपचारिकरुपमा भने भोलि माघ ३ गतेमात्र औपचारिक उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको तिलाचन युवा क्लबले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर घर्ती मगरले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई थप आकर्षण र मनोरञ्जनात्मक बनाउनको लागि तिलाचन युवा क्लबले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमहरुमा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, महिला भलिबल प्रतियोगिता, दोहोरीगीत प्रतियोगिता , पुरुष छेलो प्रतियोगिता ,घैटोफोर प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताको आयोजना गरेको क्लबका अध्यक्ष कुशल बुढा मगरले बताए।
माघे सक्रान्ति मेला हेर्न रोल्पा ,रुकुम र बागलुङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट उपस्थिति हुने र कार्यक्रम निकै नै आकर्षक हुने अध्यक्ष बुढाले जानकारी दिए ।
तस्बीर- किरण आचार्य / ईबागलुङ
मालारानीमा पहिलोपटक वस पुग्दा बसलाई फुलमाला अबीरले स्वागत !
विहानी युवा क्लव र मिलन आमा समुह बिहुँको माघे सक्रान्ति मेला जारी